Alan’Antavolobe Iaroka- Andasibe : Mpihaza 3 tsy ara-dalàna nitifitra sy namono gidro 12 -
AccueilSongandinaAlan’Antavolobe Iaroka- Andasibe : Mpihaza 3 tsy ara-dalàna nitifitra sy namono gidro 12
Alan’Antavolobe Iaroka- Andasibe : Mpihaza 3 tsy ara-dalàna nitifitra sy namono gidro 12
02/03/2018 admintriatra Songandina 0
Vokatry ny fiaraha-miasan’ny vondron’olona ifotony (VOI), ny zandarimaria ary ny sampandraharahan’ny tontolo iainana, ny haivoahary ary ny ala ao Moramanga, sarona ary tra-tehaka tao amin’ny alan’Antavolone Iaroka ao amin’ny fokontany Ampangalantsary, kaominina Andasimbe ireo mpihaza telo tsy ara-dalàna nitifitra ary namono gidro 12. Tafaporitsaka anefa ny roa tamin’izy ireo izay azo antenaina fa ho mora ny ahitana azy noho ny iray tamin’izy ireo voasambotra. Irony karazany antsoina hoe babakoto (Indri indri) irony ny 11 tamin’ireo biby arovana ireo, ary sifaka (Propithehcus diadema) ny iray.
Fandikan-dalàna tsotra izao no nataon’ireto olona ireto, satria efa nisy ny didiny 2006-400 nivoaka tamin’ny 13 jona 2006 izay mifehy ireo bibidia eto Madagasikara. Voasokajy ao anatin’ny biby arovana ireo gidro ireo, ary tsy azo atao ny mihaza sy mihinana azy. Ankoatra ny fandikana ny lalàna mifehy ny bibidia, dia fandikan-dalàna hafa nataon’ireto mpihaza ireto ihany koa ny tsy fanajana ny tetiandro napetraky ny fanjakana amin’ny fihazana izay tokony hanomboka ny 1 mey ka hatramin’ny faran’ny volana septambra.
Efa ao anatin’ny fanadihadiana ilay olona voasambotra ahafahana misambotra ireo namany ny zandarimaria sy ny sampandraharahan’ny tontolo iainana, ny haivoahary ary ny ala ao Moramanga. Aorian’ny fandihadiana dia atolotra ny fitsarana izy ireo.
Mahatsapa ny hasarobidin’ny fiarovana ny biby, indrindra ireo tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ny VOI, izay manakaiky ny toerana arovana, ka nandray ny andraikiny. Ankoatra ny fiarovana ny zava-boahary dia sehatra iray mahasarika mpizahantany, ary miteraka loharanom-bola ho an’ny firenena ireny biby ireny.